Ogaden News Agency (ONA) – “Shacabka Ogadeniya” Barnaamijka Arrimaha Bulshada ee Ilays TV
“Shacabka Ogadeniya” Barnaamijka Arrimaha Bulshada ee Ilays TV
“Odeyaasha Ree Ogadeniya si qasab ah ayaa lagu kaxeystaa kadibna shirar ku sheeg ayay ka qeyb galaan iyaga oo odeyashaas qaarna la xidho kuwo kalena laba dilo” ka daawo xasuuqa lagu hayo shacabka Somalida Ogadeniya iyo warbixino kaleba Barnaamijka Arrimaha Bulshada ee Ilays TV”.
Ilays TV ayaa soo bandhigay muuqalo Cusub oo ka hadlaya aragtida shacabweynaha somalida Ogadneiya. Barnaamijkan oo taxane ah kolbana lagu soo qaadan doono muuqalo cusub oo Gudaha Ogadeniya laga soo duubay waxaa aad ka daawan kartaan shacabka oo ka hadlaya gumeysiga iyo dhibaatooyinka uu ku hayo shacabka rayidka ah.
Ilays TV ayaa go’aansday in dadka muuqaalkooda qaarkood wajigooda laqariyo arrimo la xidhiidha ilaalinta amaanka shacabka. Muuqaladan oo siqiimi badan looga soo diyaariyay gudaha Ogadeniya waxaa kamid ah Qeybta kowaad ee Barnaamijkan oo lagu soo qaatay shacbiga Ogadeniya adkeysiga ay u hayaan halganka xaqa ah ee lagu raadinayo xoriyada shacabka Ogadeniya.
MuuqalkaBarnaamijkan ka daawo bogga hore ee ONA